Tatoazy kely ho an'ny lehilahy, tadiavo ireo endrika sy ny tsiambaratelony rehetra | Ny fanaovana tatoazy
Tatoazy kely ho an'ny lehilahy, tadiavo ireo endrika sy ny tsiambaratelony rehetra
Nat Cherry | | Tatoazy ao ambadika
Tatoazy miverina olona Ny kely dia safidy malaza be nefa sarotra be koa. Tsy ny volavola rehetra no miasa tsara satria ny lamosina dia toerana tena manokana, misy hoditra maro hosaronana.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hanome endrika vitsivitsy anao izahay ho hevitra hanome aingam-panahy anao amin'ny manaraka tombokavatsa ary hamaha ny fisalasalana sasany izahay ka ny endrinao no tsara indrindra.
1 Nahoana ny tatoazy miverina no safidy sarotra?
2 Fetsy sasany hanararaotana ity karazana tatoazy ity
2.1 Tatoazy hatoka
2.2 Ny faritry ny soroka
2.3 Ny taolan-tehezana, toerana tsara hanaovana tatoazy
2.4 Mitandrema amin'ny lamosina ambany
2.5 Misafidiana famolavolana marindrano ... na mitsangana
2.6 Diniho ny volavola ho avy sy taloha
3 Hevitra hanome aingam-panahy anao
3.2 Goaika sy vorona hafa
3.3 Teny (na andianteny)
Nahoana ny tatoazy miverina no safidy sarotra?
Efa niresaka imbetsaka tao amin'ny bilaogy izahay momba ny tombokavatsa amin'ireo faritra heverina fa manana hoditra maro hosaronana. Amin'ireny, ny lamosina no faritra lehibe indrindra: zara raha manana singa hafa handrafetana ny endrika (ohatra, ao amin'ny vatam-paty no ananantsika tratra, foitra, eo anoloana ny soroka ...), izay mora ho an'ny tatoazy kely dia kely ny hahavery azy amin'ny halehiben'io faritra amin'ny vatana io.
Raha ny marina, mpanao tatoazy maro, raha mieritreritra izy ireo fa kely loatra ny volavolanao hametrahana azy amin'ity faritra ity dia hampitandrina anao izy ireo. Na dia azonao atao aza ny tsy miraharaha azy ireo, dia zahao aloha raha marina ny mpanao tatoazy (rahateo, izy dia matihanina nahita lamosina maro) alohan'ny handraisany fanapahan-kevitra.
Fetsy sasany hanararaotana ity karazana tatoazy ity
Fa, raha fintinina, ny tatoazy kely any aoriana ho an'ny lehilahy dia tsy endrika endrika manahirana fotsiny, raha ny marina, misy ny famolavolana miasa tsara eto amin'ity toerana ity, raha mbola hainao ny manararaotra ny anatomia anao na ny endriny no habe mety. Ireto misy hevitra vitsivitsy:
Raha misafidy ny hametraka ny tatoazy ao an-damosina ianao eo afovoan'ny soroka ary eo afovoan'ny soroka dia azonao atao ny misafidy endrika kely kokoa izay raha ataonao, ohatra, eo afovoan'ny lamosina. Mazava ho azy fa ireo endrika ireo dia mazàna mitsangana kokoa noho ny marindrano.
Ny faritry ny soroka
Azonao atao koa ny manararaotra ny faritry ny soroka, fa ireo sombin-javatra ireo dia ho lehibe kokoa. Araraoty ny endrika boribory amin'ilay faritra hisafidianana ny volavolanao.
Ny taolan-tehezana, toerana tsara hanaovana tatoazy
Na dia maharary aza, Raha mila tatoazy kely any aoriana ianao dia mety ho iray amin'ireo safidinao tsara indrindra ny taolan-tehezana.. Satria eo amin'ny faritra tery indrindra amin'ny vatana izy ireo, eo anelanelan'ny lamosina sy ny lathe, dia avelany hisy endrika kely kokoa noho ny faritra sisa.
Mitandrema amin'ny lamosina ambany
Na dia tamin'ny taona sivifolo dia fahita matetika ny olona manao tatoazy amin'ny vodiny ambany, amin'izao fotoana izao dia tsy lamaody velively. Raha ny marina, ho an'ny vehivavy any amin'ny firenena sasany dia misy heviny ratsy aza. Na dia tokony hampiakatra antsika amin'ny farango aza ity, dia nosoratanay tamin'ny tranga tsy izy.
Misafidiana famolavolana marindrano ... na mitsangana
Raha mila tatoazy kely nefa lava amin'ny fotoana iray ianao, na malalaka na avo, dia azonao atao ny misafidy famolavolana tery izay mifampiraharaha hatrany amin'ny soroka na manaraka ny hazondamosina. Amin'ny fanakaikezana ireo toerana ireo dia tsy ho very any amin'ilay faritra ny endrika na hiseho ho kely noho ny tena izy.
Diniho ny volavola ho avy sy taloha
Indraindray ny tatoazy kely dia ampahany amin'ny famoriam-bola kely mamorona endrika lehibe. Na dia mieritreritra aza ianao fa amin'ny tatoazy dia tsy mila afa-tsy tatoazy ianao, dia tsara ny fanananao amin'ireo sombin-javatra ho avy tianao hotratrarina ao amin'ilay faritra. Rehefa dinihina tokoa, ny ranomainty dia mampiankin-doha!
Ary toy izany koa ireo izay efa manana endrika maro: indraindray ny tatoazy ho avy tsy mifanaraka tsara amin'ny ambinyIzany no antony maha-mendrika ny mandinika toerana mihoatra ny toerana hametrahana azy.
Hevitra hanome aingam-panahy anao
Mandalas, raha fatra amin'ny an-tsipiriany, dia mijery tsara any aoriana, eo ambanin'ny hatoka fotsiny.
Goaika sy vorona hafa
Ny vorona dia mety amin'ny fametrahana azy any ambony. Miaraka amin'ny elatra nitarina dia tena tsara tarehy izy ireo, na misy endrika tsotra be, izay ny mombamomba azy ihany no voamarika, na miaraka amin'ny antsipiriany bebe kokoa, amin'ny mainty sy fotsy na miloko. Toa iray amin'ireo tombokavatsa kely kely malaza indrindra ho an'ny lehilahy ny an'ny goaika, mahafinaritra azy ireo!
Teny (na andianteny)
Ny teny koa dia safidy tsara hitafy ny lamosinao. Drafitra kely izy ireo, saingy azo itarina na mifantoka ampy hifanaraka amin'ilay olona manao tatoazy.
Ny famolavolana foko any aoriana dia mety ho valin'izay maniry tatoazy somary kely nefa mbola milavo lefona manintona. Ny endriny marindrano dia milay indrindra, toy ny amin'ny vorona, dia fehezin'ny soroka tsara izy ireo.
Farany, Hevitra tsara iray hafa hahazoana tatoazy kely mangatsiatsiaka ho an'ny lehilahy ny mifidy sombin-javatra kely roa, iray amin'ny soroka tsirairay. Na dia madinidinika aza izy ireo, dia tsy ho afa-manoatra firy. Raiso an-tsaina ny fisafidianana endrika roa mitovy na tena mitovy na hoe miendrika endrika izy ireo mba hirindra tsara ny géometry.
Manantena izahay fa tianao sy notsindromina ity lahatsoratra ity amin'ny tatoazy kely ho an'ny lehilahy. Lazao aminay, manana tombokavatsa toa izao ve ianao? Ahoana ny hevitrao momba ity toerana ity? Aza hadino ny milaza aminay ny zavatra rehetra tadiavinao ao amin'ireo hevitra!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Tattoos on » Tatoazy ao ambadika » Tatoazy kely ho an'ny lehilahy, tadiavo ireo endrika sy ny tsiambaratelony rehetra
Ny tatoazy momba ny fianakaviana mba hitazomana hatrany ny fianakavianao
Tatoazy triforce, marika angano sy zavakanton'i Zelda